10 Tsy misy fomba Bullsh * t ahafahanao manova an'izao tontolo izao ho tsara kokoa - Blog
Fomba 10 ahafahanao manova tsara an'izao tontolo izao
Betsaka ny olona no kivy noho ny fanjakan'izao tontolo izao ankehitriny. Toa ny toerana rehetra hitodihantsika dia tototry ny ady sy fijaliana be dia be manodidina anay izahay.
ohatra amin'ny fitadiavana fihetsika mitady saina amin'ny olon-dehibe
Izany dia mety hiteraka fahakiviana mafy rehefa mandinika ny halehiben'ny korontana sy ny kely azontsika atao manokana hanovana azy rehetra.
Tadidinao ve ilay ohabolana hoe “Mieritrereta manerantany: mihetsika eo an-toerana” ? Afaka mamorona fifantohana henjana kokoa noho izany isika, ary manakaiky kokoa : 'Ho fanovana tianao ho hitan'izao tontolo izao.'
Izaho sy ianao dia mety tsy ho zavaboary mahery indrindra izay afaka manova an'izao tontolo izao ho lasa tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fametahana ny rantsan-tànantsika fotsiny, fa afaka manao fanovana lehibe isika.
Ireo indray dia afaka - ary hisosa - hiparitaka ivelany ary hisy fiantraikany amin'ny hafa.
Ary hisy fiantraikany amin'ny hafa izany.
Ity misy fomba fanovana an'izao tontolo izao, ampahany kely iray isaky ny mandeha:
Fiovana amin'ny fifandraisanao amin'ny olon-kafa
1. Miezaha ho tsara fanahy
Toa tsy misy dikany ity iray ity, saingy manaitra ny mahita hoe impiry isika no lavo rehefa hanaiky sy hankalaza ny hafa toa azy ireo.
Isaky ny manana fotoana hanaovana izany ianao, tsara fanahy . Ary raha manana ny fahafaha-manao izany ianao tena tsara fanahy, manaova koa.
Nanana traikefa nahafinaritra tamin'ny mpiasan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ve ianao tamina fivarotana? Misaora azy ireo amin-kitsimpo, ary avy eo mifandraisa amin'ny mpitantana azy ireo ary lazao azy ireo hoe asa tsara inona no ataon'ilay mpiasany.
2. Fitiavana tsy misy fepetra
Ity dia iray hafa izay mazàna sarotra amin'ny olona.
ny tia olona tsy misy fepetra tsy midika hoe mandefitra fitondran-tena ratsy na fanararaotana avy amin'izy ireo ianao, fa kosa miezaka kokoa ho tia azy ireo amin'ny maha-izy azy ianao, fa tsy amin'ny olona tianao ho tonga.
Azonao atao ny tsy mankasitraka ny fihetsiky ny olona iray, saingy tia azy ireo hatrany amin'ny maha olona azy.
Amin'ny ankapobeny, isika rehetra dia miady mafy amin'ny alàlan'ny fisiany, manandrana mahazo ny hevitry ny zavatra ary manadino andraikitra, ahiahy, fanantenana ary nofinofy isan-karazany… ary tena sarotra izany.
Misolelaka isika, tsy afaka ny ho olona tiantsika hahatongavana foana, na ilay olona mpiara-miasa / zanakay / sns. no ho sambatra indrindra amin'ny.
Mampahery tokoa ny mahafantatra fa tia antsika izy ireo na dia tafintohina aza isika, sa tsy izany? Aleo hitia ny hafa amin'izay.
ny fomba hamantarana ny fihetsem-ponao amin'ny olona iray
Azontsika rehetra atao ny milaza rehefa misy olona miaraka amintsika, ary tena tsy zavatra mahafinaritra mihitsy izany.
Ankehitriny, hafa noho ny malemy fanahy izany raha misy olona tsy liana mafy amin'ny zavatra iray, fa manandrana manohana antsika ihany izy ireo.
Ny fanatsarana dia toy ny… mametraka azy amin'ny matevina tokoa rehefa midera ankizy ianao noho ny sary nataony, na tena sariaka amin'ny olona tsy zakanao amin'ny teny hafa, hoe tsara loatra .
Betsaka ny zavatra holazaina amin'ny maha-azo itokiana sy tso-po. Tsy midika izany fa manana carte blanche ny olona ho henjana amin'ireo izay tsy tiany, fa kosa manararaotra ny fahalalam-pomba, fa tsy ny diso sy ny sakramenta.
Ity misy ohatra iray: raha tena mankasitraka ny zavatra nataon'ny olona ho azy ianao dia ambarao mangina sy am-po marina izany fankasitrahana izany fa tsy amin'ny fihetsika lehibe. Mety ho tonga tsy mahatoky tena izany.
Aza hadino fotsiny, ary ho hitanao fa ny hafa dia tso-po kokoa aminao avy eo. Izany no ahafahanao manova izao tontolo izao, fifandraisana iray isaky ny mandeha.
Safidy ataonao: Lehibe sy kely
4. Miaina amin'ny fanompoana ho an'ny hafa
Izany dia tafiditra ao anatin'ny sokajy 'safidy lehibe', ary misy ifandraisany amin'ny anao tanjon'ny fiainana .
Marina fa afaka nanokana lahatsoratra marobe tamin'ity iray ity izahay, saingy amin'ny endriny tsotra indrindra dia misy ifandraisany amin'ny zavatra tianao hatao amin'ny fotoana nomena anao, amin'ity indray mitoraka ity.
Afaka manararaotra manao zavatra tianao fotsiny ianao amin'ny fiantsoana aina, koa inona no hataonao?
Ny fisafidianana kariera mamela anao hiasa amin'ny soa lehibe kokoa dia iray amin'ireo zavatra lalina indrindra ary manome zavatra azonao atao mandritra ny am-polony taonanao eto amin'ity planeta ity.
Inona no misarika anao? Inona no lohahevitra mahaliana anao?
macho man randy savage vs hulk hogan
Na inona na inona izany manome aingam-panahy anao , misy làlan'ny kariera azonao raisina izay ahafahanao mandatsaka ny herinao amin'ny fanaovana izao tontolo izao toerana tsara kokoa.
5. Fiantsenana ara-dalàna
Ny teny hoe 'mifidiana amin'ny kitapom-bolanao' dia mahery. Isaky ny mividy zavatra ianao dia manao fanambarana momba ny zavatra inoanao, ny zavatra hizakao ary ny zava-dehibe aminao.
Raha mividy vokatra fikarakarana manokana avy amin'ireo orinasa mandoto ny tontolo iainana ianao ary manao fitsapana mahatsiravina amin'ny biby dia lazao azy ireo fa tsy maninona ianao amin'io fihetsika io, ary hanohana azy io hatrany.
Raha mividy entana namboarin'ireo tompona orinasa kely ianao, na sakafo ara-barotra, ara-barotra, dia lazao amin'ny olona manao azy ireo fa mankasitraka ny ezaka ataon'izy ireo ianao.
Inona no tianao holazaina?
Tsy isalasalana fa tototry ny hevitra miaraka amin'ity hevitra ity ianao nandritra ny taona maro, noho izany dia resaka fandinihana indray izay mety aminao indrindra.
Azonao atao ve ny manantona lamba fanasan-damba any ivelany amin'ny tsipika fanasana mba ho maina? Afaka mampiasa vy tsy misy fangarony, tavoahangin-drano azo ampiasaina indray ianao fa tsy mividy plastika? Ahoana ny amin'ny fitondrana kitapo azo ampiasaina any amin'ny fivarotana enta-madinika?
Amin'ny lafiny inona amin'ny fiainanao isan'andro no ahafahanao manatsara kely?
Na ny olona kely indrindra aza dia afaka manova ny làlan'ny ho avy. - J.R.R. Tolkein
Ny fiantraikany eo amin'izao tontolo izao
6. Aelezo ny fitobiana
Saika ny antsika rehetra dia efa niaina toe-javatra iray izay nahitana andro ratsy tokoa, fa nisy kosa nanao na nilaza zavatra izay nanodina tanteraka ilay andro.
Mety ho zavatra tsotra toy ny tsikin'ny olon-tsy fantatra io, na mpiara-miasa iray mampahafantatra anay ny fankasitrahan'izy ireo anay.
Ny asa soa kely dia kely lavitra manampy ny hafa , ary ao amin'ny tontolo iray izay olona maro no miady saina sy sosotra, ireo hatsaram-panahy kely ireo dia tena ilaina tokoa.
Miorina amin'ireo safidy voatanisa teo aloha, diniho ny fihetsika ataonao isan'andro izay misy fiantraikany amin'ny tontolo iainanao sy ny planeta lehibe any ankoatra.
Raha misafidy ny hampiasa mpanadio simika matanjaka ao an-tranonao ianao, ny olona, ​​ny mpiara-dia amin'ny biby ary ny zavamaniry dia hiharan'ny setroka avoakan'ny madio kokoa.
Rehefa arotsakao ny mpanadio ao anaty tatatra dia miditra ao anaty latabatra rano ireo akora simika ireo. Ny riandrano ambanin'ny tany izay mitondra ireo akora simika ireo dia mivoaka mankamin'ny rano lehibe kokoa, manaparitaka ireo akora simika eny lavitra eny, misy fiatraikany amin'ny zavamaniry sy ny biby na aiza na aiza alehany.
Azonao atao ny misafidy safidy tsara kokoa sy malefaka kokoa raha ny momba ny vokatra manokana, ary avy eo mandroso dingana bebe kokoa amin'ny fitantanana ekolojika lehibe kokoa.
Aparitaho ny voan-voninkazo indizena mba hahafahan'ireo mpandoto vovon-tany mamelona azy ireo. Ataovy mahasarika ny tokotaninao ny vorona sy ny bibidia eo an-toerana, na manome ho an'ny hetsika fambolena hazo.
Raha samy nilalao ny anjarantsika isika dia hisy fiatraikany lehibe eo amin'izao tontolo izao. Mandray anjara amin'izany fanovana izany.
8. Manokana fotoana sy angovo ho an'ny antony inoanao
Isika tsirairay avy dia maniry fatratra zavatra izay misy ifandraisany amin'ny tombony lehibe kokoa, koa diniho izay tsapanao fa matanjaka indrindra ho anao, ary mandraisa andraikitra hanao ny anjaranao.
Tia biby ve ianao? Hevero ny fikolokoloana ny zaza tsy manan-kialofana na ny fanomezana an-tsitrapo ao amin'ny toeram-piompiana masina.
nxt raiso ny valiny farany
Tianao ve ny manjaitra? Azonao atao ny manamboatra satroka ho an'ny zazakely na lamba firakotra ho an'ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny toby.
Afaka manao Misy zavatra izay afaka mitondra fahasamihafana miavaka amin'ny fiainan'ny hafa.
Tsy isika rehetra no afaka manao zavatra lehibe. Saingy afaka manao zavatra kely amin'ny fitiavana lehibe isika. - Reny Teresa
Ny sainao manokana (sy ny fiantraikany amin'ny zavatra hafa rehetra)
9. Ahena ny fanjifana amin'ny fahitalavitra sy ny media sosialy
Makà fotoana kely ary eritrereto ny fotoana farany nandehananao nandritry ny herinandro na mihoatra nefa tsy nijery tele. Eny, ao anatin'izany i Netflix.
Tadidinao ve izany?
Raha tsy tadidinao dia andramo. Mety ho sarotra aminao ny mitady fomba hafa hampiala-voly ny tenanao mandritra ny 24-48 ora voalohany, saingy aorian'izay dia mety ho hitanao fa mandany fotoana bebe kokoa any ivelany ianao, na mamaky, na miasa amin'ireo sasany amin'ireo tetik'asa famoronana efa nataonao atokana ho avy ilay 'farany' mikorontana.
Ahoana no fanovana an'izao tontolo izao? Manatsara ny fahasalamantsika ara-tsaina izany. Izany dia miparitaka amin'ny zavatra rehetra ataontsika sy ny olona rehetra ifaneraserantsika. Goavana io.
10. Jereo ny Tsara amin'ny zavatra rehetra
Na inona na inona toe-javatra mety hisy dia misy soa foana hita ao.
Ity fiandrasana ela ao amin'ny fivarotana enta-mavesatra ity dia fotoana iray hiresahana amin'ny olon-tsy fantatra izay toa ambany.
Mahatsiravina misaraka dia vintana ho an'ny fitomboan'ny tena manokana sy tena ilaina fotoana irery hiverina hifandray amin'izay zava-dehibe aminao.
Tsy misy fanandramana tokana izay tsy fanararaotana fanasitranana, fahatsarana ary fivoarana.
Rehefa mifantoka amin'ny zavatra tsara ianao dia mijanona tsy mifantoka amin'ny zavatra kely, toa ratsy izay mahasosotra na mahasosotra anao. Tsy dia hitaraina ianao, ary atsaharo ny fitsikerana ny manodidina anao.
Io indray no hampifaly ny fiainany, ary ho tsara kokoa amin'ny olon-kafa izy ireo, sns. Ny fahatsapana dia hitombo hatrany hatrany, hanandratra ny rehetra.
Ireto dia zavatra vitsivitsy fotsiny izay azon'ny olona atao rehetra mba hahatonga ny zorony an'izao tontolo izao somary tsara kokoa noho ny nahitan'izy ireo azy.
Ny fanaovana zavatra iray fotsiny amin'ity lisitra ity dia afaka mitondra fahasamihafana lehibe, na dia tsy hitanao eo noho eo aza izany.
ohatrinona ny vidin'ny mr bibidia
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hanovana an'izao tontolo izao ho tsara kokoa? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao amin'ny fizotranao ny famaritana izay mety ho anjara birikinao manokana. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Tantara 5 mampihetsi-po an'ny olon-tsotra nahavita zavatra lehibe
“Inona no ataoko amin'ny fiainako?” - Fotoana izao hahitana
Asa fanatanterahana 7 sahaza indrindra amin'ny empaths sy ny HSP
Antony 10 tsy tokony handraisana fiainana be loatra
Fahamarinana 4 tsy azo ihodivirana hatrehana ianao ho tonga olona tsara kokoa
Lahateny fohy TED 12 izay hanova ny fiainanao mandrakizay
vato mangatsiaka steve austin quotes
olona tsy miraharaha na inona na inona
ahoana no hahafantaranao raha misy olona manadala anao
inona no nitranga tamin'i randy orton wwe 2016
romana manjaka dia miaritra promo promo succotash
ny fomba hiatrehana ireo olona tsy tia anao
Tsy dia tia zavatra aho